LG G3 ကို Android 7.1.1 (model D855) သို့မွမ်းမံနည်း Androidsis
LG G3 ကို Android 7.1.1 (model D855) သို့မွမ်းမံနည်း။
Francisco Ruiz | | LG, ရွမ်, လဲ tutorial
မနေ့ကငါမင်းကိုသင်ပေးတယ် LG G2 ကို Android 7.1.1 Nougat သို့မွမ်းမံနည်း, အခုသူ့အစ်ကိုရဲ့အလှည့်ရောက်ပြီ။ ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအသစ်မှာမင်းကိုဘယ်လိုသင်ပြရမလဲဆိုတာပြောပြမယ် LG G3 ကို Android 7.1.1 Nougat သို့အဆင့်မြှင့်ပါ.
နိုင်ငံတကာမော်ဒယ် D855 အတွက်သာအသုံးပြုနိုင်သည် သင်၏ LG G3 ကိုဆက်လက်ခံစားရန်လိုအပ်မည့်အရာအားလုံးကိုသင်ဘယ်မှာရှာတွေ့မည်နည်း။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်စနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးယနေ့အထိနောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းကိုလှိမ့်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါသည်ဤလိုင်းများအထက်တွင်ငါကျန်ခဲ့သောဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်အောက်ကဒီမှာကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ရယူနိုငျသောဗီဒီယို "ဆက်ဖတ်နေ ... "; ငါသင်ကြားပေးတာအပြင်လိုက်နာရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီရှင်းပြပေးတဲ့ဗီဒီယို ကျွန်ုပ်၏ LG G3 မော်ဒယ် D855 ကို Android Nougat မည်မျှကြည့်လိုက်သနည်း.
1 Lg G3 ကို Android 7.1.1 Nougat သို့ update လုပ်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ချက်များ
2 LG G3 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်ကို Root လုပ်နည်း
3 LG G3 ကို Android 7.1.1 Nougat သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ
4 LG G3 International အတွက် Rom LinageOS ထည့်သွင်းမှုနည်းလမ်း
Lg G3 ကို Android 7.1.1 Nougat သို့ update လုပ်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ချက်များ
ပထမ ဦး ဆုံးအရာတစ် ဦး ရှိသည်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် LG G3 မှာ Root လုပ်ပြီးပြုပြင်ထားသော Recovery နှင့်အတူတောက်ပခဲ့သည်သင်ယခုရောက်ရှိနေသည့် Android ဗားရှင်းအပေါ်များစွာ မူတည်၍ ၎င်းကိုမည်သို့ရယူရမည်ကိုသင်မသိပါကကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောအချိန်ကပြုလုပ်ခဲ့သောကွဲပြားခြားနားသောပို့စ်များကိုလင့်ခ်လုပ်ထားသည်။ ထိုနေရာတွင်သင် Root ရရန်မည်သို့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြသခဲ့သည်။ LG G3 model D855 တွင်သင်ထည့်သွင်းထားသော Android ဗားရှင်းအရ
LG G3 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်ကို Root လုပ်နည်း
သင့်တွင် Android 6.0 Marshmallow ရှိပါကဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။
သငျသညျအန်းဒရွိုက် Lollipop ဗားရှင်းအပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင် သင်ဤ link ကိုနှိပ်နိုင်သည်.
အကယ်၍ သင်သည် Android Kit Kat ဗားရှင်းတွင်ရှိနေသေးလျှင် သင်ဤ link ကိုနှိပ်ပါ..
ရတဲ့ပြီးနောက် ပြင်ဆင်ထားသော Recovery ကိုသင်၏ LG G3 သို့ root လုပ်ပါ အောက်ပါအချက်များကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည် -
ယင်းတို TWRP Recovery သည်နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်သည် ငါပူးတွဲဗီဒီယို၌သင်တို့ကိုပြသသကဲ့သို့
ယင်ကောင်များဖြစ်ပါက EFS ဖိုလ်ဒါကိုအရန်ကူးထားပါ.
အရန်ကူးထားပါ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုလုံး၏ nadroid backup အမှု၌ကျွန်ုပ်တို့သည် Flasheode LinageOS 14.1 မတိုင်မီယခင်ပြည်နယ်သို့အချိန်မရွေးပြန်ချင်ကြသည်
ရှိ USB debugging လုပ်နိုင်ပါတယ် Developer ဆက်တင်မှ။
ဘက်ထရီကို 100 x 100 အထိအားသွင်းပါ.
LG G3 ကို Android 7.1.1 Nougat သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ
21C ရေဒီယို (သို့) Modem ကို download လုပ်ပါ
ဤ link မှ Rom LinageOS ကိုရယူပါ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်ကိုချန်လှပ်ထားခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ Google settings မှတစ်ဆင့်အခြား Android terminal တစ်ခုရှိပါကသင့်ကိုထည့်သွင်းခွင့်ပြုသည်။
ဒီ link မှ Google Gapps ကို download လုပ်ပါ, download လုပ်ရန်သတိရပါ ARM + Android 7.1 နှင့် nano သို့မဟုတ် micro တို့ဖြစ်နိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကျိုးစီးပွားနှင့်အညီ OTG မှတစ်ဆင့် flash ဖိုင်များကိုအတွင်းပိုင်း၊ ပြင်ပ (သို့) Pendrive မှတ်ဉာဏ်သို့ကူးယူပါမည် ပထမဆုံးအနေနဲ့ Recovery ကို Flashify ကနေတစ်ဆင့် update လုပ်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုအလိုရှိလျှင်ယခင်ကလုပ်ခြင်း။
download, QR ကုဒ်
Flashify (root အသုံးပြုသူများအတွက်)
ကျနော်တို့ updated ပါပြီတခါ TWRP ဗားရှင်း 3.0.2 သို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးterminal ကိုလုံးဝပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပါသော်လည်းဤညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာရန် Recovery mode တွင် -
LG G3 International အတွက် Rom LinageOS ထည့်သွင်းမှုနည်းလမ်း
သုတ်ပြီးငါတို့ရှိသမျှကိုသုတ် Rom ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များရှိသည့် နေရာမှလွဲ၍။ ဒါကိုငါးကြိမ်အထိလုပ်တယ်။
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ Install y Wipe မလုပ်ဘဲ 21C ရေဒီယိုကိုကျွန်ုပ်တို့ flash လုပ်သည်
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ Install y ပထမ ဦး ဆုံး Rom LinageOS ၏ zip ကိုရွေးချယ်ပြီး Gapps ၏ဇစ်ကိုရွေးချယ်ပါ.
ကျနော်တို့တောင်းဆိုထားသောအရေးယူဆောင်ရွက်မှု execute မှအောက်ကဘားရွှေ့ ထို့အပြင် Rom နှင့်ဂူးဂဲလ် Gapps တို့၏မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်ပျက်မှုသည်ငါးမိနစ်ကျော်ကြာသောကြာချိန်ကိုမပြီးနိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းသည်။
ကျနော်တို့၏ option ကိုရွေးပါ Dalvik နှင့် Cache ကိုသုတ်ပါ ငါတို့ဘားကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတယ်။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးစရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည် System ကို Reboot လုပ်ပါ LG G7.1.1 D3 တွင် Android 855 Nougat ကိုခံစားနိုင်သည်။
ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုသင်လုပ်နိုင်သည် သင်၏ LG G3 model D855 ကိုနောက်ဆုံးပေါ် Android 7.1.1 Nougat ဖြင့် ဆက်လက်၍ ခံစားပါ သူတို့ LG ကရှိနေသော်လည်းမည်မျှပင်ကိစ္စ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » ရွမ် » LG G3 ကို Android 7.1.1 (model D855) သို့မွမ်းမံနည်း။
6 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Orlando တွင်ဘာဘစ် ဟုသူကပြောသည်
လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ်
Orlando Barbas အားပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! ကျွန်ုပ်၏ lg g3 ကို android 6.0 နှင့်သင်၏ tutorials များ၏ကျေးဇူးကြောင့်အမြစ်တွယ်ပြီးပါပြီ။ ဤသင်ခန်းစာအားဖြင့် android7ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပါပြီ။ ငါကအပြည့်အဝအကြံပြုပါသည်
ဒါပေမယ့်သံသယ။ andoid7ကို install လုပ်တဲ့အခါ root checker က root မလုပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ ဒါဆိုငါ့မေးခွန်းက
- android7နှင့်အမြစ်ကိုဖယ်ရှားသည် (ကျွန်ုပ်သည်ထာဝရဖြစ်သည်ဟုထင်သည်)
- သို့မဟုတ်ငါအမှားတစ်ခုခုလုပ်မိပြီလား အတော်လေးဖြစ်နိုင်သမျှ hahaha
မင်္ဂလာပါ၊ မေးမြန်းချက်တစ်ခု၊ ကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးပါက၊ ထိပ်ဆုံးရှိရွေးချယ်စရာများကိုကျွန်ုပ်ရှာမတွေ့ပါ။ MIRACAST နဲ့ SMART SHAME BEAM လိုမျိုး ... ငါဘယ်မှာရှာရမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကံမကောင်းစွာဖြင့် LG ကိုချစ်မြတ်နိုးစေသောအရသာများအားလုံးဆုံးရှုံးသွားသည်
အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုတပ်ဆင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ lg သည်အခြားဆဲလ်ဖုန်းနှင့်တူသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ်
ငါ့မှာ g g d2 ရှိတယ်။ marsmalow ကိုသူတို့အုတ်ခဲတွေဖြစ်အောင် update ချင်တယ်။ မင်းကငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါသူတို့ကိုငါပြန်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
Android 7.0 Nougat ကိုဥရောပ၌ HTC 10, 10 Lifestyle နှင့် One M9 တို့တွင်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
Xiaomi သည်အိန္ဒိယတွင်ပထမဆုံးစတင်ရောင်းချသည့် ၁၀ မိနစ်အတွင်း Redmi Note 250.000 ၂၅၀,၀၀၀ ရောင်းချခဲ့သည်